Steroid Anti Estrogen, Fat Loss Steroids, Steroid Anabolic Injectable - Taigui
Shanghai Taigui Pharmaceutical Technology Co., Ltd, a na-eduga soplaya nke ọma chemical na China, dị na China 's kasị ukwuu mba ahia metropolis shanghai, The pụrụ iche ala ọnọdụ nke Shanghai bụ mma maka Transport.The ụlọ ọrụ bụ a mmepụta na ahia mwekota ụlọ ọrụ. , ma na-etinye nnukwu ego na ụbụrụ na ngalaba R&D iji nyochaa ezigbo kemịkalụ, biochemical, pharmaceutical & ngwaahịa etiti ya dabara na ahịa ahịa.
CAS 10418-03-8 ma ọ bụ ...
Nweta akwara dị nro ...
Oral anabolic ste ...
Na-ewulite akwara dị nro...
Ọgwụgwọ ọrịa kansa ...
Anabol nwere ike igba ogwu...
Ọgwụgwọ ntutu isi...
Nkasi obi kpakpando
anyị agaghị agba mbọ inyere gị aka.
duzie gị otu esi azụta, nyere aka soro ngwugwu ahụ
hụrụ nzaghachi ndị ahịa n'anya mgbe iwuchara
a zuru ezu otu onye nwere factory isi iyi , ọkachamara teknuzu mkpara , ịnụ ọkụ n'obi ahịa , a pụrụ ịdabere na mgbe-sales ọrụ .
Ahụmahụ bara ụba na-enyere anyị aka ịmata ka esi ebu ngwaahịa, nke ụlọ ọrụ mbupu ịhọrọ ịkwado ihe egwu, yana otu esi ezipu ngwugwu n'aka ndị ahịa n'enweghị nsogbu.
Ndị na-eweta ihe
nwere onye nkesa na mba dị iche iche iji gboo mkpa ndị ahịa.
n'ihi na anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yabụ anyị nwere ike ịnye ngwaahịa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ụlọ.
Nka na ụzụNdị ọrụ
Ụlọ ọrụ ahụ enwetala nkwado nke ISO9001, ma nwee QA & QCsystem zuru ezu.Anyị nwere ọtụtụ ngwa nyocha nke nwere arụmọrụ dị elu yana mmetụta dị elu, dị ka HPLC, GC na UV spectrophotometer iji nyochaa ma jikwaa ngwaahịa ndị a.Ogo ngwaahịa a ruru ụkpụrụ USP na GMP.
Anyị na-enye ngwaahịa kacha mma, nkwakọ ngwaahịa ọkachamara, ọrụ kacha mma na ụgbọ njem kwụsiri ike iji ree ụwa niile.Anyị na-agba mbọ ka anyị na ndị ahịa anyị na-enwe mmekọrịta enyi na enyi na-adịte aka.
Ebe ọ bụ na e guzobe ya, anyị factory na-azụlite mbụ ụwa ngwaahịa na adhering ụkpụrụ nke àgwà mbụ.Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma na ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie.
kacha ọhụrụakụkọ & blọọgụ